टेलिकमसँग १ लाख क्षतीपुर्ती मागेका अपीलले पाउने भए जम्मा ५ हजार | Jukson
फोन समयमा नजोडेपछि टेलिकमले तिर्ने भयो ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना
संचारकर्मी अपील त्रिपाठीले केहि दिन अगाडि एउटा स्टाटस लेखे । नेपाल टेलिकमले ल्याण्डलाइन फोन जोड्ने बेलामा अनावश्यक दुख दिएको भन्दै उनले त्यसको क्षतीपुर्तीस्वरुप सोहि स्टाटसमार्फत माग गरेका थिए । माग गरिएको क्षतीपुर्तीको रकम थियो, एक लाख रुपैयाँ ।
पैसा तिर्दा पनि लामो समयसम्म फोन नजोडेको र बारम्बार फलोअप गर्दा पनि टेलिकमले वास्ता नगरेको कारणले आफ्नो आर्थिक तथा मानसिक क्षती भएकोले उनले सो रकम माग गरेका थिए ।
पछि उनले नेपाल टेलिकममै त्यो निवेदन हाले । तर नेपाल टेलिकमले उनलाई राम्रो रेस्पोन्स गरेन । टेलिकमका हाकिमसँग उनले बारम्बार समय माग गर्दै यो विषयमा कुरा गर्न चाहे । तर प्रत्येक चोटी उनी टेलिकमबाट निराश नै भएर फर्कनुप¥यो । र, उनले जिल्ला क्षतीपुर्ती समितिमा टेलिकम विरुद्ध उजुरी हाले ।
टेलिकमले उपभोक्ताप्रति दायित्व बहन गर्न उदासिनता देखाएको ठहर्दै समितिले सो कार्यालयलाई क्षतीपुर्ति स्वरुप ५ हजार रुपैंया भराउने फैसला ग¥यो । उपभोक्ता मञ्च कास्कीले विहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर यो कुराको जानकारी गराएको छ ।
‘यस्ता सेवा प्रदायक निकायहरुले उपभोक्ताहरुलाई निकै समस्यामा पार्ने घटनाहरु यसअगाडि पनि नघटेका होईनन् । तर उपभोक्ताहरुले नै यस्ता कुरालाई पचाउँदै आएका थिए ।’ पत्रकार सम्मेलनमा उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपीलनाथ कोईरालाले भने–‘तर अपीलजीले उपभोक्ताको पक्षमा बोल्ने आँट गर्नुभएको छ ।’
उनले अपील त्रिपाठीले माग गरेअनुसारको रकम नपाएपनि समितिले कम्तीमा टेलिकमलाई कारबाहिको दायरामा ल्याउने गरि निर्णय गरेको बताए । ‘टेलिकमलाई सेवा ढिलाई गरेको भन्दै दण्ड सुनाईएको घटना नेपालमै पहिलोपटक हो । यद्यपी अहिलेसम्म क्षतीपुर्ती भनेर टेलिकमले पैसा तिरिसकेको भने छैन ।’
उपभोक्ताको रुपमा आफु ठगिएको भन्दै १ लाख रुपैयाँ क्षतीपुर्तीको माग गरेका अपील त्रिपाठीले भने समितिले गरेको निर्णय आफुलाई मान्य भएको बताए । ‘खासमा मैले त एक लाख नै मागेको हो । तर मैले यो बार्गेनिङ गर्नलाई मागेको होईन । समितिले दण्ड तिराउने निर्णय गरेको छ । त्यो नै मेरो लागि जीत हो ।’ उनले भने । खासगरि नेपाल टेलिकममा आगामी दिनमा पनि सेवाग्राहिलाई बेवास्ता गर्ने, हल्का रुपमा लिने सँस्कार नबसोस् भन्ने हेतुले आफु यो विषयमा अलिक सक्रिय भएर लागेको उनले बताए । साथै टेलिकमले समयमा सेवा दिन नसके क्षतीपुर्ती भर्नुपर्ने नजिर बसाल्न समेत आफुले उजुरी दिएको उनले बताए ।
क्षतीपुर्ती समितिले गरेको निर्णय उचित नलागे टेलिकम र अपील त्रिपाठी (जो उजुरीकर्ता हुन्) दुवै पक्षले ३५ दिनभित्र उच्च न्यायालय जान सक्ने स्पेस दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा उजुरीकर्ता त्रिपाठी आफु उच्च न्यायालय जाने विषयमा क्लियर नभैसकेको जानकारी दिए । यद्यपी नेपाल टेलिकमले यो विषयलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी नै छ । उसले अपीललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानास्वरुप तिर्ला या उच्च अदालतको बाटो समात्ला ?
साढे ३३ केजी सुनकाण्ड : को हुन् ‘गोल्ड डन’ गोरे ?
प्रदीप खड्का राजा दिपेन्द्र शाह बन्ने
भैरहवामा बम विस्फोट, स्थानीय त्रसित